Pope Francis nyefere China n’aka Meri Nwanyị A gọziri agọzi | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Pope Francis nyefere China na nwanyị ahụ gọziri agọzi
China bu ebe obibi ndi Katoliki karịrị nde iri, nde mmadu isii debara aha ha dika ndi otu ndi Katọlik Katọlik na China, dika onu ogugu ndi mmadu si kwuo.
VATICAN CITY - Pope Francis Domenica nyefere China n'aka Virgin Mary a gọziri agọzi ma rịọ ndị mmadụ ka ha kpee ekpere maka mwụpụ mmụọ nsọ ọhụrụ na mba kachasị ọnụ ọgụgụ n'ụwa.
"Ezigbo ụmụnne nwoke na ụmụnne nwanyị Katọlik na China, achọrọ m ịkwado gị na Churchka eluigwe na ala, nke ị bụ akụkụ dị mkpa, na-ekerịta olileanya gị ma na-akwado gị n'ule gị," Pope Francis kwuru na May 24 mgbe ekpere Regina Caeli gasịrị.
"Ọ na-eso gị n'ekpere maka mwụpụ ọhụrụ nke Mmụọ Nsọ, ka ọkụ na ịma mma nke Oziọma ahụ, ike nke Chineke maka nzọpụta nke onye ọ bụla kwere, wee nwute n'ime gị," ka popu kwuru.
Pope Francis enyela China Ngọzi Apostolic pụrụ iche maka emume nke Our Lady Help of Christian. Mlọ Marian nke Sheshan dị na Shanghai, nke ewepụtara maka Enyemaka Nwanyị anyị nke Ndị Kraịst, ka ga-emechi na ezumike a ka diocese nke Shanghai kwụsịrị ọrụ njem niile maka ọnwa Mee iji gbochie mgbasa nke coronavirus.
"Anyị na-enyefe ndị ozuzu aturu na ndị kwesịrị ntụkwasị obi nke inka Katọlik na nnukwu ala ahụ nduzi na nchekwa nke nne anyị nke eluigwe, ka ha wee nwee ike sie ike n'okwukwe ma kwụsi ike na njikọta nke nwanne, ndị aka ebe nwere ọ joyụ na ndị na-akwalite ọrụ ebere na olileanya nwanne, na ezigbo ụmụ amaala" , Pope Francis kwuru.
"Ka Nne anyi di aso chebe gi mgbe nile!" O kwukwara.
N’okwu ọ gwara Regina Caeli, popu tụgharịrị uche n’okwu Jizọs e dekọrọ n’Oziọma Matiu maka mmemme nke nrịgo Jizọs rịgoro n’eluigwe, sị: “Ya mere gaanụ mee mba nile ka ha bụrụ ndị na-eso ụzọ m, na-eme ha baptizim n’aha nke Nna na nke Ọkpara na Mmụọ Nsọ, na-ezi ha ka ha debe ihe niile m nyere unu n’iwu ”.
N’afọ 2018, Holy See na gọọmentị China binyere aka na nkwekọrịta nwa oge maka ịhọpụta ndị bishọp na Churchka na steeti ahụ nke nkwado ha, bụ nke ekwupụtabeghị iwu ya. Site na nkwekọrịta a, ndị bishọp a chụpụrụ na mbụ nke Chọọchị Katọlik Katọlik nke China, nke ndị Communist na-achịkwa, nabatara na Vatican na mkpakọrịta zuru oke.
Nkwupụta wepụtara na 2020 nke Chinese Commission nke United States gosiri na ndị Katọlik Katọlik nwetara "mkpagbu na-arịwanye elu" mgbe nkwekọrịta Vatican na China gasịrị. O kwuru na gọọmentị "na-akwatu ụlọ ụka, na-ewepụ obe ma na-aga n'ihu na-ejide ndị ụkọchukwu n'okpuruala." E kwuru na anwụchiri ndị ụkọchukwu na ndị bishọp ma ọ bụ gaa zoo.
Na mbido izu a, Vatican kpughere na ndị Katọlik na China nwere ike iji usoro mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi nke China ama ama ama ama ama ama ama ama bụ WeChat, na-asọba ọnụ ahịa Pope Francis kwa ụbọchị n'oge ọrịa coronavirus.
O doro anya ma ndị Katọlik nọ na China nwekwara ike ile ndụ iyi nke ekpere Marian Sunday a maka obodo ha na WeChat n'ihi mmachi siri ike sitere na mgbasa ozi n'ịntanetị niile nke China.
Pope Benedict XVI hibere omenaala ikpe ekpere maka China na oriri Marian nke Nwanyị Nwanyị anyị nyere Ndị Kraịst n’afọ 2007, wee kpee ekpere nye Lady anyị nke Sheshan maka emume a.
Pope Francis enyefela aka nke Mary Enyemaka nke Ndị Kraịst niile ndị na-eso ụzọ Kraịst na ndị niile nwere ezi uche na-arụ ọrụ maka udo, mkparịta ụka n'etiti mba dị iche iche, ijere ndị ogbenye na nlekọta nke okike.
Pope mekwara emume ncheta nke ise nke mbipụta nke encyclical gburugburu ebe obibi ya, Laudato si '. O kwuru na ọ dere Laudato si 'ka “dọta uche n'iti mkpu ụwa na ndị ogbenye".
Pope Francis kwuru n'oge ọ na-agwa Regina Caeli okwu site na vidio gụgharia onyonyo e dekọrọ n'Ọbá akwụkwọ nke Vatican's Apostolic Palace. Otú ọ dị, na nke mbụ ya n’ime ihe karịrị izu iri, e kwere ka ndị mmadụ nọrọ na Square Peter mgbe popu pụtara na windo inye ngọzi.
A chọrọ ka onye ọ bụla na-abanye n’ámá ahụ kpuchie ihe mkpuchi ihu na usoro nchebe ọha na eze maka ndị gbakọtara n’èzí St. Peter’s Basilica, nke meghere ọha na eze na May 18.
Ka e dechara ihe karịrị nde mmadụ 5 gburugburu ụwa na COVID-19, popu rịọrọ Nwanyị Nwanyị Lady Help nke Ndị Kraịst ka ọ rịọchitere arịrịọ "maka mmeri nke mmadụ na ọrịa niile nke ahụ, obi na mkpụrụ obi"
Pope Francis kwuru, "mmemme nke nrịgo Jizọs rịgoro n'eluigwe na-agwa anyị na Jesu, ọ bụ ezie na ọ rịgoro n'eluigwe wee biri ebube na aka nri nke Nna, ọ ka nọ n'etiti anyị oge niile iji nweta ume, nnọgidesi ike na ọ joyụ."